I-SSD hard drive ngokuthelekisa -Izona zi-5 ziqhuba kakuhle kwi-SSD kuvavanyo
ikhaya/umcebisi/Uvavanyo lwe-hard drive ye-SSD: I-5 ye-SSD efanelekileyo yokuqhuba i-1TB
Uvavanyo lwe-hard drive ye-SSD: I-5 ye-SSD efanelekileyo yokuqhuba i-1TB
Vangelis18. January 2020
Uvavanyo lwe-ssd hard drive
I-SSD hard drive inokwenza ukuba ikhompyuter yakho ibaleke ngokukhawuleza. Ikhompyuter yakho iqala kancinci kwaye ithatha ixesha elide ukusebenza neWindows? Okanye ngaba inkqubo yokuqalisa yeenkqubo ithatha ixesha elide kakhulu? Emva koko ufuna i-SSD hard drive. Ezi zikhawuleza kakhulu kunesiqhelo ii-HDD hard drive. Kule mihla kukho abavelisi abaninzi ababonelela ngeendlela ezahlukeneyo kwintengiso. Nangona kunjalo, akukho lula ukufumana idiski efanelekileyo. Sikwazisa kwii-SSD ezi-5 eziqhuba kakuhle kunye ne-1 TB evela kubavelisi abohlukeneyo kwaye sinethemba lokuba uya kuba neyakho Isigqibo sokwenza lula indlela oyenza ngayo phinda ufumane ukuhambisa idatha ngokukhawuleza.
I-Samsung MZ-76E1T0B / EU 860 EVO 1 TB SATA 2,5 "I-SSD yangaphakathi emnyama
I-SanDisk SSD Plus i-hard drive yangaphakathi ye-1 TB (yonyusa ukusebenza kokubhala kwimowudi yokugqabhuka, ukuqala ngokukhawuleza, ukucima kunye nokulayisha, funda isantya i-535 MB / s, isantya sokubhala i-450 MB / s, isothuse)
I-WD Blue SATA SSD 1 TB, ii-intshi ze-2,5 (i-SSD yangaphakathi, ukuthembeka okuphezulu, ifikelela kwi-560 MB / s, ibhale ukuya kuthi ga kwi-530 MB / s, shockproof kunye ne-WD FIT Lab-certified)
Intenso 3812460 yangaphakathi SSD hard drive 1TB TOP ukusebenza
I-Crucial BX500 CT1000BX500SSD (Z) 1TB yangaphakathi SSD (3D NAND, SATA, 2,5-intshi)
X x 7 0,7 10 cm
X x 0,7 10,1 7 cm
X x 10 7 0,7 cm
X x 10 0,7 7 cm
I-SATA III (6 GB / s)
1 Eyona ndlela ilungileyo yokuqhuba i-SSD ngokujonga nje
2 Ezona zi-5 ziqhuba kakuhle ze-SSD xa kuthelekiswa
3 1. Isamsung MZ-76E1T0B / EU 860 EVO
4 2. ISanDisk SSD PLUS 1TB Sata III
5 3. Idijithali yaseNtshona WDS100T2B0A WD Luhlaza
6 4. Intenso lwangaphakathi SSD hard drive 1TB ukusebenza TOP
7 5. Ebalulekileyo BX500 CT1000BX500SSD1 (Z) 1 TB
9 Yintoni i-SSD hard drive?
10 Izinto eziluncedo kwi-SSD hard drive
11 Isebenza njani i-SSD hard drive?
12 Ngaba kukho iimodeli ezahlukeneyo ze-SSD ezinzima?
13 I-SSD yangaphandle yedrive drive
14 Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uthenga i-ssd hard drive?
15 Iingenelelo kunye nokungalunganga
Eyona ndlela ilungileyo yokuqhuba i-SSD ngokujonga nje
Sithelekisa nabo kwisikhokelo sethu I-5 ye-1TB SSD yangaphakathi yokuqhuba kanzima yazisa kwaye ikwazise malunga nokusebenza kunye nokuba kuya kufuneka uhoye ntoni xa uthenga.
Hayi ngokukhawuleza nje Ukuhanjiswa kwedatha yingxoxo yalonto I-SSD hard drive, ngakumbi ukuxhathisa ukothuka. Ukuba ilaptop yakho iwe phantsi, amathuba omonakalo ayancitshiswa kwaye awakho ihadi diski unamathuba amakhulu okuhlala womelele. i Iidiski eziqhelekileyo ze-HDD bachaphazeleka kakhulu koku.
Okwangoku, ii-hard drive zihlala ziphuhliswa kwaye ziphuculwa. Kukwabizwa njalo M.2 SSD iidrayivu ezinzima phezulu kakhulu-kwaye-eza. Itekhnoloji entsha ibenza ukuba bakhawuleze kwaye kunye nophuhliso lwangoku lweemarike, baya kuthi ngenye imini bathathe indawo ye-HDD yesiqhelo kwaye Ukuqhuba kanzima kwe-SDD tyhala kude.
Ezona zi-5 ziqhuba kakuhle ze-SSD xa kuthelekiswa
1. Isamsung MZ-76E1T0B / EU 860 EVO
I-Solid State Drayivu (i-SSD) yokuphuculwa kokusebenza kwe-PC kusetyenziso lwemihla ngemihla, ilungelwe ngokufanelekileyo njengenye indawo ye-HDD (idiski enzima)
Amandla amaninzi ukufika apho ngokukhawuleza: ukuya kumaxesha e-3,6 ngokukhawuleza kunokuba i-HDD (ukufunda i-550 MB / s, isivinini se-520 MB / s ukubhala)
I-hard drive yokuqala ye-SSD kuthelekiso lwethu ivela Isamsung MZ-76E1T0B / EU 860 EVO SSD hard drive yeeWindows kunye neLinux . I-1TB hard drive ine Isantya sokufunda of 550 MB / s kunye Bhala isantya se-520 MB / s. Ukulungele ngokufanelekileyo ukusebenza ngokukhawuleza kwikhompyuter. Ngobungakanani be 2,5 ngaphakathi I-Samsung SSD ingena kwii-desktop ze-PC nakwiindawo ezininzi zeencwadana. Umenzi unikezela enye ngaphezulu I-500GB, i-1000GB, i-2000GB kunye nohlobo lwe-4000GB on.
2.5 intshi SATA 6 GB / s
Isamsung 3core MJX
Iqondo lobushushu elisebenzayo: 0 - 70 ° C
Into yeFom: M.2 2280
Ubukhulu: 50 g
2. ISanDisk SSD PLUS 1TB Sata III
Funda isantya ukuya kuthi ga kwi-535 MB / s kwaye ubhale isantya ukuya kuthi ga kwi-450 MB / s, phucula ukusebenza kwePC yakho. I-hard drive yangaphakathi inentsebenzo ephezulu kunezinye ii-hard drive.
Ukuphucula iPC yakho endala. I-hard drive yangaphakathi ye-SSD inika iPC yakho ixesha elide kwaye ikhawuleze.
Okwesibini i-hard drive ivela kwi-SanDisk. i Isifo sephepha esi-1 sikhulu Ukurekhoda kubiza malunga nama-euro angama-85 kwaye kutshiphu kancinci kuneemodeli zokhuphiswano. Umvelisi weSanDisk SSD hard drive naye unayo I-120GB, i-240GB, i-480GB, i-1TB kunye ne-2TB ziyafumaneka kwimarike. i Isantya sokufunda sama-535 MB / s kwaye Bhala isantya se-450 MB / s ixhasa ukuqhubekekiswa kwedatha ngokukhawuleza kuneedrive eziqhelekileyo eziqhubayo. Ngobungakanani bee-intshi ezi-2,5 akufuneki kube yingxaki Idrayivu enzima yeSanDisk ukufakwa kuyo nayiphi na incwadi yokubhalela okanye kwi-PC yedesktop.
Ukufikelela kumaxesha angama-20 ngokukhawuleza kuneedrive ezinzima
Ukuqalisa ngokukhawuleza, ukucima
Ukuxhathisa umothuko kuqinisekisa ukuhlala ixesha elide
Ubushushu obusebenzayo: 0ºC - 70ºC
Ifom yefom: 6,35 cm (2,5 in)
3. Idijithali yaseNtshona WDS100T2B0A WD Luhlaza
I-SSD hard drive ibonelela nge-1,75 yezigidi zeeyure ze-MTTF ukuya kuthi ga kwi-400 TBW yokunyaniseka okwandileyo
Nge-SATA SSD une-shockproof kunye ne-WD FIT LAB eqinisekisiweyo yangaphakathi hard drive ehambelana neendlela ezahlukeneyo zeekhompyuter
Die Idijithali yaseNtshona yeWDS100T2B0A WD Luhlaza yidiski yesine ye-SSD xa kuthelekiswa. Umenzi unikezela ngeenguqulelo ezahlukeneyo kunye nobukhulu bale hard drive, njenge-250, 500, 1000 kunye ne-2000 GB. Enkosi kwi-SLC edityanisiweyo (iNqanaba elinye leSeli) itekhnoloji ye-caching, i-SSD yenza ifayile ye- Isantya sokufunda of 560 MB / s kunye Isantya sokubhala of 530 MB / s. Ke, idatha efana B. kwi yokuzonwabisa-Ukuqhubekeka kumiliselwe ngokuqhwanyaza kweliso.
Le hard drive ime apha kunye nokusetyenziswa kwayo kwamandla asezantsi kakhulu. Umvelisi we-WD ukwabonelela ngezixhobo zokubeka iliso kwidiski kwiwebhusayithi yayo. Imeko yediski enzima, enje ngobushushu kunye nomthamo, ijongiwe. Ngokuqinisekiswa kweLebhu yokuVavanya ukuSebenza ngokuDibeneyo (i-FIT Lab), umenzi uqinisekisa ubomi benkonzo ende kwi-hard drive yayo.
Inombolo yomzekelo: WDS100T2B0A
Isinxibelelanisi sediski enzima: Uthotho lwe-ATA-600
Ubunzima: 50 g
4. Intenso lwangaphakathi SSD hard drive 1TB ukusebenza TOP
Ukulandelelana kokufunda: ukuya kuthi ga kwi-520MB / s -Bhala ngokulandelelana: ukuya kuthi ga kwi-500MB / s
I-interface ye-SATA III ene-6 Gbps yenza ukuba iikhompyuter okanye i-netbooks ziqale kwimizuzwana engaphantsi kwe-20
−3,00 i-eur 76,90 yeEUR
Naleyo I-SSD hard drive ukusuka kwi-Intenso ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo be-128GB, i-256GB, i-512GB kunye ne-1TB. Le SSD inceda ngonxibelelwano lweSATA III 6 GB / s a Isantya sokufunda of 520 MB / s kunye Isantya sokubhala of 500 MB / s. Kukulungele kakhulu ukusetyenziswa kwiilaptops okanye iiPC. Ikwanonxibelelwano lweSATA III yokulinganisa idatha ethembekileyo. Ngenxa yokusebenzisa amandla asezantsi, kufanelekile ngakumbi kwiincwadana, kuba ngale ndlela ubomi bebhetri bunokwandiswa.
Qalisa iikhompyuter okanye iincwadi ze-net kwimizuzwana engaphantsi kwe-20
Isantya esiphezulu seMLC NAND flash
5. Ebalulekileyo BX500 CT1000BX500SSD1 (Z) 1 TB
Ukuqalisa ngokukhawuleza. Ukulayisha ngokukhawuleza kweefayile. Ukuphucula inkqubo yokuphendula
I-300% ngokukhawuleza kunomsebenzi okhuselekileyo wedrayivu
I-hard drive yokugqibela ye-SSD kuthelekiso lwethu yi I-Cruional BX500ngaphakathi kwe-SSD 1 TB. Kunye Isantya sokufunda of 540 MB / s enye Isantya sokubhala Ye-500 MB / s i-SSD hard drive iphinda-phinde ama-20 ngokukhawuleza kune-drive endala. Ngenxa yobukhulu obuqhelekileyo be-intshi ye-2,5, ingena phantse kuyo yonke incwadana kunye / okanye kwiPC. Umvelisi ogqithisileyo ukwabonelela ngesoftware yasimahla yokujonga imeko yehard drive. I-Acronis eyiyo yoMfanekiso oBalulekileyo ibandakanyiwe.
Yonyusa ubomi bebhetri yeelaptops
Ifomathi ye-intshi ye-2,5
Itekhnoloji yehard drive enzima
Yintoni i-SSD hard drive?
a I-SSD hard drive luphuhliso olungaphezulu Ihard drive yemveli yemveli. Itekhnoloji yokugcina okanye ukucwangciswa kwedatha kwahlukile kuleyo yoqobo I-HDD hard drive kwaye ke ngokwenza ukwanda okukhulu kwisantya sakho Iikhompyuter okanye iilaptops. Oku kunciphisa ixesha lokulinda xa iWindows iqala. Idatha ikhutshelwa ngokukhawuleza, iifayile zevidiyo kunye nevidiyo zilayishwa ngokukhawuleza. Ngokubanzi, loo hard drive ye-SSD yinto yexabiso kuye wonke umsebenzisi wekhompyuter.
Izinto eziluncedo kwi-SSD hard drive
Thelekisa phakathi kwe I-HDD enye I-SSD hard drive ibonisa umohluko omkhulu.
Izibonelelo ezingenakuphikiswa ze-SSD hard drive kukuba zikhawuleza Isantya sokufunda / sokubhala kunye nokuphuculwa kwesantya sokufikelela xa kuthelekiswa nediski eqhelekileyo. Oku kulungiselelwe Umsebenzi Ngokuqinisekileyo ibonisiwe kwizicelo ezikwikhompyuter yakho. Ukuba inkqubo yokusebenza ifakiwe kwi-hard drive ye-SSD enje ngeWindows, ukuqala kwePC okanye ilaptop kukhawuleze kakhulu.
Iinkqubo zikwaqaliswa ngokukhawuleza okukhulu kwaye ke ziyafumaneka ngokukhawuleza. Bonke abasebenzisi abaqheleneyo nemizobo kunye Ukuhlelwa kwevidiyo kufuneka uyenze ngokukhawuleza umahluko. Imidlalo yekhompyuter ifikelela kolunye ubungakanani kumaxesha okulayisha kwimidlalo ngenxa yesantya esikhulu.
Ukongeza izibonelelo ezichazwe apha ngasentla, kukho ukhuseleko lwedatha yakho. Ngeemveliso ezindala ze-HDD, iziphene ezibangelwa yintloko yokufunda zazingaqhelekanga kwaye idatha yakho yayihlala isemngciphekweni okanye ingasekho. Oku akunakwenzeka nge-hard drive ye-SSD, njengoko idatha igcinwa kwiichips zememori zebhodi encinci. Iintshukumo ezomeleleyo kunye nokuwa ngelixa usebenza kwi ikhompyutha ayinampembelelo kukhuseleko lwedatha yakho. Uncedo olukhulu, ngakumbi xa usebenzisa iincwadi zeencwadana xa usendleleni.
Olunye uncedo lwe-SSD hard drive kukusetyenziswa kwamandla asezantsi. I-SSD isebenzisa iqhezu lamandla xa kuthelekiswa nesiqhelo I-HDD. Kufunyenwe ukuba ukusebenzisa i-SDD kunokugcina ubomi bebhetri yencwadana inemizuzu engama-60 ubude.
Ukuphuhliswa kwengxolo esezantsi kwe-SSD kufuneka kukhankanywe ngokufanelekileyo. Ngelixa imisindo ecaphukisayo ehamba kunye nokuhlala iviwa ngehard drive ye-HDD, i-SSD isebenza cwaka. Awunakuva nantoni na, nokuba umthwalo unzima kangakanani.
I-SSD hard drive incinci kune-HDD yesiqhelo. Inobungakanani be- 2,5 ngaphakathi Ngokuchasene ne 3,5 ngaphakathi iHDD. Incinci ke kwaye ayithathi ndawo ininzi kwimeko yekhompyuter.
Ngaphandle kwezibonelelo ezininzi, ngelishwa kukho ukungalunganga kwiidiski ze-SDD. Iindleko zokuthengwa zimalunga ne-20% ukuya kuma-30% ngaphezulu kunee-HDD eziqhelekileyo eziqhuba nzima. Yile ndlela i-SSD hard drive ibiza ngayo 1 TB ngoku malunga 90 € -120 €.
Isebenza njani i-SSD hard drive?
Njengoko sele kukhankanyiwe, yahlukile Itekhnoloji enye Idiski ye-SSD kwi Ihard drive endala yeHDD nzulu. Ukuba idatha ifundwe kwii-hard drive ze-HSS kusetyenziswa iidiski zemagnethi kunye neentloko zokufunda / ukubhala, le ndlela yoomatshini ayisasebenzi kwi-SSD. Itekhnoloji yokugcina idatha iguqukile.
Nge-hard drive ye-SSD, idatha ngoku igcinwe kwiitshipsi ezimbalwa. Oku kuthetha ukuba idatha ifumaneka ngokukhawuleza okukhulu. Kwakhona sebenza nale ndlela Izinti ze-USBImemori khadi kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwee-smartphones. i I-SSD hard drive izakuba yinto eqhelekileyo Isidibanisi seSATA imvuse.
Ukongeza, abadala bebekhona Ukuqhuba kanzima kweHDD uthambekele kukothuka. Xa i-hard drive ye-HDD yawa, yayihlala inesiphene ngokuthe ngqo kwaye ingasenakusebenziseka kuba intloko efundwayo yonakele xa iwe. Isiphene saye sabonakala kwangoko, njengoko intloko yokufunda yayingasaziwa okanye kuvakala ingxolo.
Isizukulwana esitsha sediski enzima ziidiski ezinzima ze-SSD okanye ngoku M.2 SSD iidrayivu ezinzima. Okokuqala nokuphambili, iipleyiti zisetyenziselwa ukwenza iikhompyuter / iilaptops ngokukhawuleza ngokubanzi.
Nokuba yikhompyuter yedesktop okanye incwadana yokubhalela. Uninzi lusebenzisa i-HDD hard drive eqhelekileyo kunye ne-SDD hard drive ngokuhambelana. Oku kuthetha ukuba unokufaka iWindows kwi-hard drive ye-SSD kwaye indawo eyongezelelweyo yehard drive efunekayo inokusetyenziswa kwi-HDD hard drive.
Ukongeza ekusebenziseni iikhompyuter zedesktop kunye neencwadana zokubhala, ii-SSD hard drive zikwasetyenziselwa ezinye ezininzi Izixhobo ezisetyenzisiweyo. Umzekelo, ungasebenzisa kwakhona i-SSD hard drive njenge i-hard drive yangaphandle sebenzisa. Uqhagamshela idiski kwi-USB kwaye unokuhamba ngokulula kunye / okanye ukhuphele idatha emva naphambili.
Nge-SSD hard drive ezininzi ziya kuthanda Umdlalo womdlalo njenge Xbox One okanye Indawo yokudlala 4 ziphuculwe nge-SSD. AmaGamers afumana isantya esikhulu sokudlula ngaphezulu kwabadlali behard drive yeHDD.
Kukho ezahlukileyo Iimodeli zehard drive ze-SSD?
Iidrive hard drive ziyafumaneka ngokwahluka okwahlukileyo kwaye zihlala ziphuhliswa kwaye zilungiswa. Ezi modeli zilandelayo ziyafumaneka:
I-2,5 intshi ye-SSD hard drive
Ukuqhuba kanzima kweSLC SSD
Ukuqhuba kanzima kweMLC SSD
I-SSD yangaphandle yedrive drive
Unokusebenzisa ifayile ye Intambo ye-USB sebenzisa ngaphandle. Zisetyenziswa njengemoto eqhelekileyo eqhelekileyo.
Uncedo lwe-hard drive yangaphandle kukuba unokuhlala uhamba nayo. Nokuba ziincwadi, iifoto okanye enye idatha. Kufuneka kwakhona kukhankanywe apha ukuba i-SSD yangaphandle yediski esekho yeyakho Isantya einokufikelela, ukuba ikunye USB 3.0 idityanisiwe. Ukuba banxibelelana ne-USB 2.0, baya kuncitshiswa kwaye isantya sincitshiswe.
Qaphela: I-hard drive ye-SSD akufuneki iphazanyiswe. Idiski yesiqhelo ye-HDD kufuneka ikhubazeke ngamanye amaxesha ukwenzela ukunciphisa ixesha lokufikelela. Nge-hard drive ye-SSD, oku akuyomfuneko kwaye kunokuba yingozi.
I-UGREEN hard drive ebiyelweyo eyi-2,5 intshi i-USB C 3.1 iGen 2 ukuya kwi-SATA III ukuya kuthi ga kwi-6 Gbps indawo ebiyelweyo yangaphandle ye-SSD kunye ne-HDD enobude obungu-9.5mm / 7mm i-UASP ixhaswayo, indawo ebiyelweyo yeSATA ene-USB C 3.1 indibano engenasixhobo
Isantya esiphezulu: Enkosi kwizibuko le-USB C 3.1 Gen 2 elinamandla ukuya kuthi ga kwi-6Gbps, i-2.5 intshi ye-SATA hard drive yezindlu ikwaxhasa iprothokholi ye-UASP, ethi, xa idityaniswe nomlawuli okwaziyo ukusingatha i-UASP, inikezele ukuya kuma-70% isantya esiphezulu kunesiqhelo. I-USB 3.0.
Ukuhambelana okupheleleyo: Izindlu zangaphandle zenza i-2,5 intshi yeSATA SSD / HDD hard drives ukuphakama kwe-9,5mm kunye ne-7mm, kuninzi lwe-USB okanye i-USB C / Thunderbolt 3 izixhobo ezifana neeTV, iirutha, PS5 / 4, Xbox, MacBook, MacBook Pro , iMac, ilaptop, iPC kwaye ixhasa ii-hard drives kumthamo omkhulu ukuya kuthi ga kwi-6TB. Iplagi & Dlala, akukho ufakelo lweMarc phantsi kweWindows XP / 7/8/10/11, Linus, Mac OS 8.0 nangaphezulu.
−3,00 i-eur 16,99 yeEUR
Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uthenga i-ssd hard drive?
Njengoko sele kukhankanyiwe ngaphambili, baninzi abavelisi abahlukeneyo abaneemodeli ezahlukeneyo zedrive kwimarike. Kulula ukulahla umkhondo wezinto. Yeyiphi i-hard drive elungileyo? Yintoni ekufuneka ujonge kuyo xa uthenga? Ewe, wonke umntu kufuneka azenzele isigqibo kwaye isigqibo sokuthenga siphenjelelwa zizinto ezahlukeneyo:
Ukuba isantya sidlala indima enkulu, le nto kufuneka ithelekiswe ngokweenkcukacha. Abavelisi bathembisa ngesantya esikhulu. Umzekelo, kukho abavelisi abathembisa ukuba idatha iya kuqhutywa ngesantya se-approx. 3000 MB / s inokufezekiswa ngomzuzwana. La maxabiso kunzima kakhulu ukufezekisa, kodwa ngehardware efanelekileyo kunye nokulungelelanisa ungakha kula manani.
Ukuze i-hard drive ye-SSD ifezekise isantya esona siphezulu, i I-SATA 3 okanye i-PCI-Express mayigqitywe.
Indawo yokugcina yinto yesibini ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa uthenga i-hard drive. Bonke abavelisi ngoku banikezela ngobungakanani bendawo yokugcina. Ekuqaleni bekukho i-32 GB, emva koko i-128 GB, i-256 GB, i-500 GB kwaye ngoku i-1-4 terabytes is standard.
Ixabiso lixhomekeke kubungakanani bememori. Indawo yokugcina ofuna ukuyithenga, ixabiso liya kuba phezulu. Into ovumayo ukuyihlawula iya kuwe. Nangona kunjalo, umntu kufuneka ahlale ekhumbula ukuba Itekhnoloji yehard drive isoloko iguquka. Ke ngoku kukho enye Idrabyte hard drive malunga ne-100 € ngokuxhomekeke kumenzi.
Iingenelelo kunye nokungalunganga
Isantya esikhulu xa kuthelekiswa nee-HDD eziqhuba nzima
Iindleko zokufumana eziphezulu
I-TurboWrite buffer yokusebenza ephezulu yokubhala ngemithwalo yomsebenzi omde
Ukulandelelana kokufunda: ukuya kuthi ga kwi-520MB / s -Bhala ngokulandelelana: ukuya kuthi ga kwi-500MB / s; Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi; Umothuko onganyangekiyo, umsebenzi ongenangxolo (0dB)
I-300% ngokukhawuleza kune-hard drive eqhelekileyo; IMicron 3D NAND-iminyaka engama-40 yenkqubela phambili kwimemori yehlabathi
Impazamo enkulu: ngaba isoftware iyanceda kwiingxaki zePC?
Iingcebiso ezi-5 zokuthenga esweni-indlela yokwenza isigqibo esifanelekileyo
IGPS: Ukulandela umkhondo kwesithuthi ngobuchwephesha obutsha
Amakhadi emizobo-ngaphandle kwabo akukho kuveliswa kwakhona kwedatha kunye nemifanekiso
Uyithenga phi kwaye phi iPC enewindows?
I-1 ne-1 yehlabathi yezibonelelo: Ireyithi ye-All-Net-Flat rate kunye neepremiyamu zayo
Umcebisi weWindows: uKhuseleko oluPhezulu ngokuchasene neKeylogger
Uyikhusela njani iWindows